Kitra – «Can 2019» : hanoman-tena any Irak sy Frantsa ny Barea | NewsMada
Kitra – «Can 2019» : hanoman-tena any Irak sy Frantsa ny Barea
Ao anatin’ny fandinihana ny hiatrehana ny fihaonana manaraka, fifanintsanana ny “Can 2019”, ankehitriny ireo mpanazatra ny Barea de Madagascar. Fantatra àry izao fa hisy lalao ara-pirahalahiana telo hatrehina, ato ho ato.
Tsy mbola mifarana akory ny fifaninanana ho an’ny Barea de Madagascar. Mbola miandry ny ekipam-pirenena malagasy ny fifanintsanana, eo amin’ny fiadian-toerana amin’ny “Can 2019”. Anisan’ny fihaonana akaiky indrindra ho an’ny Barea de Madagascar, ny fiatrehana ny andro faharoa, ho an’ny vondrona “A” eo amin’ io fifaninanana io.
Ny fandraisana ny Liona-n’ i Téranga, avy any Senegal, ny 19 marsa 2018. Fihaonana hotanterahina etsy amin’ny kianjaben’i Mahamasina. Hiady ny lohany ao amin’ity vondrona “A” ity ny roa tonta. Hatreto samy manana isa 3 avy saingy manantombo amin’ ny “goal difference” ry zareo Senegaly, izay +3 raha +2 kosa ny an’ny Barea.
Ho fanomanana izany fihaonana izany, hiatrika lalao ara-pirahalahiana miisa telo ny Barea de Madagascar. Raha ny fandaharam-potoana, ho any Kampala, ny Barea de Madagascar, ny 4 oktobra ho avy izao, ka hifandona amin’ny The Cranes, Ogandà. Herinandro aorian’izay, izany hoe ny 10 oktobra, handeha hanafika any Patsoura, ka hifanandrina amin’ny ekipam-pirenen’i Irak ary ny farany, ao Paris, hifanandrinana amin’i Kaomoro. Tsy mbola voatondro ny daty hanatontosana io lalao io, fa any amin’ny volana novambra.
Marihina fa ao anatin’ny fanomanana ity “Can 2019” ity ihany koa ry zareo Kaomorianina, izay ao anatin’ny sokajy “B”, miaraka amin’i Malawi sy i Kaomoro ary i Kameronina, saingy tsy miatrika ny fifanintsanana intsony ry zareo Kameronina, noho izy mpampiantrano.
Nambaran’ny tomponandraikitra eo anivon’ny federasiona fa mbola eo am-pandaminana izy ireo ankehitriny. Tsy mbola fantatra kosa hatreto ny ho firafitry ny mpilalaon’ ny Barea de Madagascar ny amin’ireo fihaonana ireo.